Google inowedzera mabasa matsva kuti unakirwe nema audiobooks ako | Gadget nhau
Google inowedzera maficha nyowani kuti unakirwe nema audiobooks ako
Ruben gallardo | | vaverengi
Pakutanga kwegore rino 2018, Google yakapa chiratidzo chekutanga chebheti yayo pamabhuku ehurukuro. Yakavhura chikamu chemabhuku akarondedzerwa muchitoro chayo cheGoogle Play uye nekudaro anoita kuti mabhuku asvike kuvanhu vazhinji. Mwedzi miviri gare gare, Google inowedzera mabasa matsva kuti unakirwe, kunyangwe zvimwe, aya mazita.
Ma audiobook eGoogle aishaya kumwe kugadziridzwa kuti akwanise kunakidzwa nemazita chero nguva. Nekudaro, zvinoita sekunge internet hofori irikuita zvakanaka uye yakagadziriswa mushandisi ruzivo nemabasa matsva aunogona kunakirwa zvese pane Android uye iOS.
Kutanga kuwedzerwa ndiko kunonzi "Smart Resume". Iri basa richaita usambofa wakarasa tambo pane zvese zvauri kunzwa nezvenyaya yawakanyudzwa mairi. Uyezve, kana uchishandisa smartphone kuita izvi, uchave nekukanganisa kanopfuura kamwe panguva yekutaurisa (kumwe kufona, imwe yambiro, nezvimwewo). Mune ino kesi, ino nyowani ficha inonzwisisa kudzosera kumashure kune yekupedzisira izwi iwe rawakanzwa nezvenyaya.
Chechipiri tichava nazvo tichava nemabhukumaki kana «Mabhukumaki». Uye ndezvekuti kugona kuisa mamaki muzvikamu zvakatiratidzira zvakanyanya munyaya kuti tizviraramise, zvakakosha. Uye zvishoma kune avo vajaira kugara vakatakura penzura nebepa navo.
Yetatu, isu tichava nemukana wekuwedzera maGoogle audiobooks kumagariro edu ezuva nezuva uye gadzira kuverenga - kana kuteerera - neGoogle Mubatsiri. Ndokunge, mubatsiri weGoogle chaiye anosanganisira iro audiobook sechimwe chinhu zuva nezuva mangwanani ako. Iwe unogona zvakare kuwedzera kana kudzikisira iyo yekutaurisa kumhanya kuti ienderane nezvaunoda.
Kugumisira asi kusiri kupedzisira, ma audiobook awakatenga paGoogle Play munogona kugovana semhuri. Kufambisa uko Apple yakatova nako kwenguva pakati pemabasa ayo ekugovana zvemukati munhoroondo yemhuri. Izvi zvinogona kuitwa nekutenda kune basa "Raibhurari Yemhuri" o Raibhurari Yemhuri uye yakaverengerwa munyika gumi nenhatu, kusanganisira Spain.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Gadgets » vaverengi » Google inowedzera maficha nyowani kuti unakirwe nema audiobooks ako
Iyi laser tekinoroji inokwanisa kuburitsa ruzha pasina kwainosvika
Tess, nzvimbo yekuongorora inozobatsira NASA kutsvaga kwehupenyu pane zviuru makumi maviri exoplanets